दूध निर्यात गर्न सरकारसँग अनुमति माग – NewsAgro.com
दूध निर्यात गर्न सरकारसँग अनुमति माग
September 15, 2015 newsagro0Comments Agriculture, Milk, Nepal, Newsagro.com, कृषि विकास मन्त्रालय Ministry of Agriculture Development of Nepal, डा. उदयचन्द्र ठाकुर Udaychandra thakur
यो समाचार 325 पटक पढिएको
काठमाडौं, २९ भदौ / मुलुकमा उत्पादित दूध भारत निर्यात गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्सँग अनुमति मागेको छ ।
दैनिक ३० हजार लिटर दूध भारत निर्यात गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सहमति दिएपछि कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्सँग निर्यातका लागि अनुमति मागेको हो । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दूध निर्यातको अनुमति माग्ने फाइल दर्ता गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले बताए । तीन दिनअघि पनि मन्त्रालयले निर्यातका लागि अनुमति माग्न खोज्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पर्याप्त कारण देखाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मार्फत भारतको पटनास्थित सुधा डेरीमा दैनिक ३० हजार लिटर दूध निर्यात गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।
‘मुलुकमा दूध खपत घटेका कारण यहाँ उत्पादित दूध खेर जान थालेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्ने वातावरण बनाउन भारतमा निर्यात गर्न लागिएको हो । हामीले निर्यात गर्न पायौँ भने किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जान पाउन पाउँदैन ।’ निर्यात थालेपछि सबै किसानले उत्पादन गरेको दूध खरिद गरिने उनले बताए । अहिले निजी क्षेत्रका डेरी र डिडिसीले किसानबाट उत्पादित सबै दूध किन्न सकेका छैनन् ।
अहिले बजारमा खपत घटेका कारण किसानबाट सबै दूध किन्न नसकेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बताए । ‘बजारमा खपत हुने परिमाणको दूध मात्रै किसानबाट किनिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केही किसानले दूध बिक्री गर्न नपाउँदा खेर जाने स्थित आएको छ ।’ सरकार र व्यवसायीले उत्पादित दूध नकिन्दा केही समयअघि विभिन्न जिल्लाका किसानले बाटोमा दूध पोखेका थिए । त्यसपछि सरकारले किसानको दूध खरिद गर्ने वातावरण बनाउन भारत निर्यातको तयारी थालेको हो ।
भारतमा दूध सस्तो भएकाले सरकारले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ९६ पैसा डिडिसीलाई अनुदान उपलब्ध गराएर निर्यातको तयारी थालेको छ । अनुदान उपलब्ध गराएको रकमबराबर दूधको मूल्य घटाएर डिडिसीले भारतमा निर्यात गर्नेछ । ‘हालको बजार मूल्यअनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ९६ पैसा मूल्य घटाउँदा भारतीय मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने भएपछि सोबराबरको रकम डिडिसीलाई अनुदान दिने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले भने । तत्कालै किसानको दूध खरिद गर्ने सबैभन्दा राम्रो विकल्पका रूपमा भारत निर्यातलाई हेरिएको बताए । ‘तीन महिनासम्म दूध निर्यात गर्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने ।
तीन महिनापछि जाडो सुरु हुने र दूध उत्पादन घट्ने उनले बताए । उत्पादन घटेपछि आन्तरिक बजारमा दूध खपत भई निर्यात गर्नु नपर्ने उनले बताए । तर, जाडोमा उत्पादन घटेसँगै खपत पनि घट्छ । गर्मीको तुलनामा जाडोमा आइसक्रिम, दहीलगायतको खपत घट्छ । किसानले हाल पाइरहेको मूल्य नघटाई दूध निर्यात गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘दूध निर्यात गर्ने विषयमा छलफल हुँदा अहिले किसानले पाइरहेको मूल्य घटाउन हुँदैन भनेका छौँ,’ उनले भने । कृषि मन्त्रालयले पनि किसानले पाएको मूल्य नघटाउन डिडिसीलाई प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ९६ पैसा अनुदानको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
भाारतमा दूध निर्यातका लागि सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले जानकारी दिए ।
‘डिडिसीले नेपाली किसानबाट किन्ने मूल्यभन्दा भारतमा बेच्ने मूल्य सस्तो छ, त्यसैले निर्यातका लागि अनुदान चाहियो भन्ने कुरा आएपछि अर्थबाट सहमति भएको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य किसानले उत्पादन गरेको दूध दैनिक रूपमा बेच्न पाउन् र डिडिसीले पनि निर्यात गर्दा नोक्सान बेहोर्न नपरोस् भन्ने हो ।’ कृषि मन्त्रालयले तीन महिनासम्म दैनिक ३० हजार लिटरका दरले दूध निर्यात गर्न अर्थसँग १ करोड ६० लाख ९२ हजार रुपैयाँ मागेका थियो । सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पुडासैनीले बताए ।
दूध निर्यात गर्न अनुदान दिनेछौ
प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
अहिले खपत घटेका कारण किसानले उत्पादन गरेको सबै दूध डेरीले किन्न नसकेको कुरा आयो । किसानले उत्पादन गरेको सबै दूध किन्ने वातावरण बनाउन भारत निर्यात गर्नुपर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । तर, डिडिसीले अहिले किसानबाट किनेको मूल्यभन्दा भारतमा बेच्नुपर्ने मूल्य सस्तो भएपछि नोक्सानी हुने देखियो । त्यसैले किसानले उत्पादन गरेको दूध दैनिक रूपमा बेच्ने र डिडिसीले पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारतमा दूध बेच्ने वातावरण बनाउन प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ९६ पैसा अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ । हामीले अनुदान दिएको रकमले किसानले उत्पादन गरेको दूध समयमै बिक्री गर्न पाउँछन् भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।
← मनाङमा रोपेको ५ महिनामा स्याउ उत्पादन
उपभोक्ता संस्था स्वच्छ हुनुपर्ने माग →
गुठीको जग्गा किसानलाई दिन सुझाब
लौं आयो ‘किसान पेन्सन’ प्रस्ताव !
May 4, 2016 newsagro 0
कृषिको पकेट क्षेत्रमा मात्रै अनुदान
December 15, 2015 newsagro 0